Dowladda Puntland oo Sheegtay in dagaalka Tukaraq lagu carqaladeynayo Booqashada Madaxweyne Farmaajo | SAHAN ONLINE
Dowladda Puntland oo Sheegtay in dagaalka Tukaraq lagu carqaladeynayo Booqashada Madaxweyne Farmaajo
Cabdullaahi Maxamed Jaamac(Quraanjecel)
GAROOWE – Dowladda Puntland ayaa markii ugu horaysay ka hadashay weerarka ciidamo ka socda Somaliland saaka kusoo qaadeen kastamka Tukaraq ee gobolka Sool.
War Saxaafadeed uu soo saaray Afhayeenka Madaxtootada Puntland Cabdullaahi Quraanjecel ayaa lagu sheegay in duulaanka Somaliland loola jeedo in lagu carqaladeeyo safarka Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu ku joogo Puntland.
Dowladda Puntland waxay u sheegaysaa dhammaan Ummada Soomaaliyeed in saaka abaarihii shanta aroornimo ay duulaan qar iska xoornimo ah ciidanka Somaliland kusoo qaadeen deegaanka Tukaraq ee gobolka Sool,kaasoo loola jeeday in lagu carqaladeeyo safarka Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo shalay booqasho ku yimid Puntland..”ayaa lagu yiri qoraalka.
Dowladda Puntland ayaa sheegtay iney jawaab cad ka bixinayso duulaanka lagu soo qaaday deegaankaas.
Dowladda Puntland iyadoo hubta in ciidamada amaanka Puntland ku filan yihiin difaaca dhuleedka,hadana waxay la socod siinaysaa shacabka Puntland inay ka qaybqaataan una diyaar garoobaan difaaca dhulkooda..”ayey tiri Puntland.
Puntland ayaa ugu dambeyn sheegtay iney mas’uul ka noqon doonin cawaaqib xumada ka dhalata duulaanka lagu soo qaaday dhulkeeda.
Ugu dambeyn waxay dowladda Puntland la wadaagaysaa Dowladda Federaalka Soomaaliya,daneeye-yaasha xasiloonida Soomaaliya,Dowladaha deriska ah iyo beesha caalamka in aysan Puntland mas’uul ka noqon doonin khasaaraha iyo cawaaqib xumada ka dhalan karta duulaanka lagu soo qaaday dhulkeeda…”..”.